ब्लगिङ गर्न गाह्रो पनि होइन तर त्यसो भन्दैमा ब्लगिङ त्यति सजिलो पनि छैन : मनकुमारी ठाडा - MeroReport
ब्लगिङ गर्न गाह्रो पनि होइन तर त्यसो भन्दैमा ब्लगिङ त्यति सजिलो पनि छैन : मनकुमारी ठाडा
धनकुटा कि मनकुमारी ठाडा मानबशास्त्र संकायको बिद्यार्थी हुन् । मनकुमारी प्लान इन्टरनेशनल नेपालको क्षेत्रिय कार्यालय बागलुङ्गमा कार्यरत छिन् । साहित्यीक पुस्तकहरु पढ्न मनपराउने मनकुमारीले एउटा मगर भाषाको कबिता संग्रह पनि प्रकाशित गरिसकेकी छन् । नयाँ ठाँउ घुम्न तथा पैदल यात्रा गर्न असाध्यै मनपराउने मनकुमारीलाई साथीहरुसँग भेटघाट गर्न र संगित सुन्न पनि उत्तिकै मनपर्छ । फुर्सदमा कथा अनि कबिता लेख्न मनपराउने मनकुमारी ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै मनकुमारी ठाडासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
म एक साधारण नेपाली चेली त्यस्तो खास केही पहिचान छैन । म मात्र मनु ठाडा हुँ । अरु नेपाली सरह जिबन गुजार्ने क्रममा बाग्लुङ्गलाई कार्यथलो बनाई काम गरिरहेकी छु ।
लेखन मेरो रुचि हो,जसले मलाई ब्लगिङसम्म जोड्न सफल भयो । खासमा मलाई केही आफ्ना भावनाहरु लेख्न मन पथ्र्याे, लेख्थे तर त्यो कुरा नेपालका ठुला अखबारमा छापिने कुरै थिएन । त्यसैले आफ्ना कुरा राख्न ब्लगिङ भरपर्दो माध्यम लाग्यो ।
कसरी ब्लग शुरु गर्नुभयो ?
केहि कुराहरु लेख्थे, साथीहरुलाई सुनाउँथे, कतिलाई त्यो बिषयमा रुचि हुन्न थियो वास्ता गर्दैन थिए, कोहि साथीहरुले राम्रो लेख्ने रहेछौ लेख भनेर हौसला दिन्थे । तिनै लेख रचनालाई साथीहरु भन्दा बाहिरी सर्कल सम्म पुराउनलाई ब्लग सुरु गरे भन्नु पर्ला ।
सन् २००८ तिर, म जति खेर म मार्टिन चौतारी भन्ने एक संस्थामा काम गर्थे । त्यँहा अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरु हुन्थे, साथै बिभिन्न छलफलका कार्यक्रमहरु हुन्थे । त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुदा मलाई पनि केहि लेख्न मन लाग्थो, दैनिक जिबनमा भोगेका कुराहरुलाई त्यहि भित्रका साथीहरुलाई सुनाउथे, त्यसै बखत मेरो एक जना साथी (कैलाश राई) ले ब्लग बनाउनु भएछ । उनै मार्फत मैले भने पहिलो पटक फ्रि को डोमेन प्रयोग गरेर यसरी आफ्ना लेख रचनालाई अनलाईनमा राख्न मिल्छ भन्ने कुरा थाहा पाएकी थिए । उनै साथीको सल्लाह अनुसार मैले ब्लग बनाएकी हुँ ।
आफ्नै आत्मसन्तुष्टिका लागी म ब्लगिङ गर्छु । हो यसबाट मैले केहि सुचना, जानकारी वा जनचेतना पनि फैलाउन सक्छु तर यहाँ कति नै मानिस छन् र जो ब्लग हेर्छन ? यद्यपी आफुलाई लागेका कुराहरु ब्लग मार्फत शेयर गर्छु यी कुराहरु एक दुई जनाले हेरे होलान भनेर चित्त बुझाउँछु ।
खासमा ब्लगिङ गर्नकै लागि भनेर विषयवस्तु कहिले पनि छान्दिन । जे मनमा आउँछ त्यो लेख्छु अनि पोष्ट गर्छु ।
तपाईले http://mgrgeen.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनु हुन्छ ?
मेरो ब्लग त यहि एउटा हो । यसैलाई निरन्तरता दिन त कति गाह्रो हुन्छ अरु के चलाउनु र? तर कहिले काहि www.wenepali.com भन्ने अनलाईन पत्रिकालाई केहि लेखहरु तयार गर्छु ।
अनि ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ त ?
ब्लगिङ गर्न गाह्रो पनि होइन तर त्यसो भन्दैमा ब्लगिङ त्यति सजिलो पनि छैन । सजिलो यस मानेमा कि, यो फ्रि हो, इन्टरनेट चल्ने ठाँउमा सहजै उपलब्ध हुन्छ । आफुलाई लागेका कुराहरु कसैको रोकटोक बिना पोष्ट गर्न पाइन्छ । तर गाह्रो यस मानेमा कि एक पटक बनाई सकेको ब्लगलाई निरन्तरता दिन, यसलाई आवश्यक विषयहरु तयार गर्न र पोष्ट गर्न । र ब्लग रोचक, सन्देश मुलक वा जानकारी मुलक बनाउन सके राम्रो हुन्छ र लेखन शैलीमा मिठास ल्याउन सके अझ राम्रो, यि कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर समय अभाबमा ब्लगिङ गर्न त्यति सजिलो पनि छैन ।
धेरैले लेखन शैली राम्रो छ भन्नु हुन्छ ।
ब्लगिङ बाहेक तपाईको रुचिका विषय के के हुन?
ब्लगिङ्ग बाहेकका मेरा रुचिहरु धेरै छन् । एउटा रुचि समाज र यसको प्रकृयालाई बुझ्नु पनि हो । जुन मैले हाल गरि रहेको कामबाट पनि गरि रहेकी छु ।
त्यस्तो रमाइला घटनाहरु नै त खासै छैनन्। हालै पोष्ट गरिएको कथा हर स्टोरी मेरो एक जना प्यारी बहिनी (साथी)को फेसबुक स्टाटसहरुको संग्रह हो । उनले दिनमा ३, ४ वटा स्टाटस राख्थिन अनि मैले एक दिन भने साने तिम्रो स्टाटस देखेर त म नै एउटा कथाको पात्र बनि सके मलाई सबै संग्रह गरेर दिन्छौ भने म कथा बनाई दिन्छु, उनले खुबै उत्साहित भएर हुन्छ भनिन र तुरुन्तै सबै स्टाटस संकलन गरेर पठाइन तर मेरो कार्यब्यस्तताले केही ढिलो ति स्टाटसहरुलाई कथाको रुप दिए । उनि यति खुसि भइन कि एकछिनलाई मानौ उनको मनको ठुलै इच्छा पुरा भयो । यस्तै हुन् खासै यसबाहेक रमाईलो खासै अहिले सम्झिन सकिन तर मैले ब्लगिङ्गबाट धेरै साथीहरु बनाएकि छु जो अहिले फेसबुक मार्फत जोडिएका छौ‌ंं।
केहि हद सम्म हो । तर नागरिक पत्रकारिता मात्र नभएर यसभित्रको बिषयबस्तुको प्रकृतिलाई हेरेर पनि यसलाई ब्याख्या गर्न सकिन्छ ।
अनि आफ्नो रुचिको विषयलाई ब्लगमा कत्तिको समाबेश गर्नु भएको छ?
थुप्रै छन्, कथा, कबिता, घुमघाम तथा समसायिक बिषयलाई ब्लगमा राखेकी छु यिनीहरु मेरा रुचिकै बिषयहरु हुन् । सबै भन्दा मुख्य कुरा त मेरो रुची लेखन हो जसलाई निरन्तरता दिन ब्लगले साथ दिएको छ ।
मैले यसरी ब्लगर अफ द विक भन्ने पनि हुन्छ भन्ने सोचेको थिइन, थाहा पाए । धन्यवाद !